Umsebenzi kaMoya oNgcwele Nomsebenzi kaSathane | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Umsebenzi kaMoya oNgcwele uwuhlobo lomhlahlandlela ohamba phambili nokukhanyiselwa okuhle. Awuvumeli abantu ukuba babe ngovumazonke. Ubanikeza induduzo, ubanikeza ukholo kanye namandla futhi ubenza bafune ukupheleliswa nguNkulunkulu. Uma uMoya oNgcwele esebenza, abantu bayakwazi ukungena ngokucacile; ababona ovumazonke noma abaphoqiwe, kodwa bakubeka ezandleni zabo ukwenza umsebenzi. Uma uMoya oNgcwele esebenza, abantu bayajabula futhi bayazimisela, futhi bayazimisela ukulalela, bayakujabulela ukuzithoba, yize noma besebuhlungwini futhi bebuthakathaka ngaphakathi, kufanele bazimisele ukuba babambisane, bayajabula ngokuzwa ubuhlungu, futhi bayakwazi ukulalela, futhi abangcoliswanga yintando yomuntu, abangcoliswanga ukucabanga komuntu, futhi abangcoliswanga nhlobo izifiso nezisusa zomuntu. Uma abantu bebhekene nokusebenza kukaMoya oNgcwele, baba ngcwele ngempela ngaphakathi. Labo ababanjwe nguMoya oNgcwele baphila uthando lukaNkulunkulu lubonakale, uthando lwabazalwane babo, futhi bathokoziswa yizinto ezithokozisa uNkulunkulu, bazenyanye izinto ezenyanyisa uNkulunkulu. Abantu abathintwa ngukusebenza kukaMoya oNgcwele banobuntu obujwayelekile, futhi bahlala njalo nje befuna iqiniso futhi banobuntu. Uma uMoya oNgcwele esebenza ngaphakathi kubantu, izimo zabo ziba ngcono kakhulu, nobuntu babo buye ngokuya buba ngobujwayelekile, yize noma ukuzibandakanya kwabo kungabonakala kungubuwula, izisusa zabo zilungile, nokungena kwabo kuhle, abazami ukuphazamisa, futhi akukho bubi nankohlakalo ngaphakathi kubona. Umsebenzi kaMoya oNgcwele ujwayelekile futhi ungokoqobo, uMoya oNgcwele usebenza emuntwini ngokusho kwemithetho yempilo ejwayelekile yomuntu, futhi ukhanyisela aphinde ahole abantu ngokwezindlela ezijwayelekile zabantu. Uma uMoya oNgcwele esebenza kubantu, uyabahola abakhanyisele njengokwezidingo zabantu abajwayelekile, ubahlinzeka ngokusekelwe ezidingweni zabo, futhi uhola ngendlela enhle abakhanyisele ngokuncike kulokho abangenakho, nasezidingweni zabo; uma uMoya oNgcwele esebenza, lo msebenzi uhambisana nemithetho yempilo ejwayelekile yabantu, futhi kusempilweni yangokoqobo kuphela lapho abantu bekwazi ukubona umsebenzi kaMoya oNgcwele. Uma, ezimpilweni zabo zansuku zonke, abantu behlezi bekhuthazekile futhi benempilo yangokomoya ejwayelekile, babe sebegcwaliswa ngomsebenzi kaMoya oNgcwele. Esimweni esinjalo, uma bedla futhi bephuza amazwi kaNkulunkulu baba nokholo, uma bekhuleka baba nokushiseleka, uma okuthile kwenzeka kubona ababi ngabangenandaba, futhi njengoba kwenzeka kubona bayakwazi ukubona izifundo uNkulunkulu adinga ukuba bazifunde, ababi ngabangenandaba, futhi yize noma beba nezinkinga zangempela, bazimisele ukulalela zonke izinhlelo zikaNkulunkulu.
Yimuphi umsebenzi ovela kuSathane? Emsebenzini ovela kuSathane, imibono ebonwa ngabantu iluvindi futhi ayibambeki, futhi ayinabo ubuntu obujwayelekile, izisusa eziqhutshwa yizenzo zabo azilungile, futhi yize noma befisa ukumthanda uNkulunkulu, kuhlezi kunezinsolo ngaphakathi kubona, futhi lezi zinsolo nemicabango kuhlezi kuphazamisa ngaphakathi kubona, kuvimbela intuthuko empilweni yabo, futhi kubavimbela ukuba babe nezimo ezijwayelekile phambi kukaNkulunkulu. Okusho ukuthi, uma nje kuqala kuba nomsebenzi kaSathane ngaphakathi ebantwini, izinhliziyo zabo azikwazi ukuba nokuthula noNkulunkulu, abazi ukuthi bazenzenjani, uma nje bebona ukuhlangana kwabazalwane ndawonye bafuna ukubaleka, futhi abakwazi ukuvala amehlo abo lapho abanye bethandaza. Umsebenzi wemimoya emibi udicilela phansi ubudlelwane obuhle phakathi komuntu noNkulunkulu, uphinde uphazamise imibono yangaphambilini yabantu noma indlela yangaphambili yokungena ekuphileni, ezinhliziyweni zabo angeke besakwazi ukusondela kuNkulunkulu, kuhlezi kunezinto ezenzekayo ezidala ukuphazamiseka kanye nokubopheka kubona, futhi izinhliziyo zabo azikwazi ukuthola ukuthula, basale bengenamandla othando lukaNkulunkulu, nemimoya yabo ishone phansi.. Lezi yizibonakaliso zemisebenzi kaSathane. Umsebenzi kaSathane ubonakala ngalezi zindlela ezilandelayo: ukungakwazi ukumela okholelwa kukho kanye nokufakaza, okukwenza ube ngumuntu osephutheni phambi kukaNkulunkulu, futhi ongenakuthembeka kuNkulunkulu. Uma kuba nokuphazamisa okuvela kuSathane, uphelelwa uthando nokuthembeka kuNkulunkulu ngaphakathi kuwena, buphele ubudlelwane bakho obujwayelekile noNkulunkulu, awulandeleli iqiniso, noma ukuzithuthukisa, uyahlehla, ube ngongenandaba, uzitike, uzinikele ekuziphatheni ngokuthanda kwakho nokusabalalisa isono, ungabi nakho ukusizonda isono; phezu kwalokho, ukuphazamisa kukaSathane kukwenza ube nenkani, lokhu okwenza uNkulunkulu aphume ngaphakathi kuwena, futhi kukwenze ukhononde ngoNkulunkulu uphikisane naYe, kukuholele ekumngabazeni uNkulunkulu, futhi ube ngisho nasengozini yokumshiya uNkulunkulu. Konke lokhu kungumsebenzi kaSathane.
Umsebenzi kaMoya oNgcwele uqhubekela phambili ngenkuthalo, ngenkathi umsebenzi kaSathane uwukubuyela emuva nokunganaki, ukungalaleli uNkulunkulu, ukuphikisana noNkulunkulu, ukulahlekelwa ukholo kuNkulunkulu, kanye nokungazimiseli ngisho ukucula amahubo noma ukusukuma udansele uNkulunkulu. Lokho okuvela ekukhanyiselweni nguMoya oNgcwele akuphoqwa ukuba ukwenze, kodwa kuyazenzekela ngokwemvelo. Uma ukulandela, uzoba neqiniso, futhi uma ungakwenzi lokho, kamuva kuba nokusolwa. Uma kungukukhanyiselwa kukaMoya oNgcwele, lapho-ke akukho okwenzayo okuyothikanyezwa okuthile noma okuyovinjwa, uyokhululwa, kuyoba nendlela oyohamba ngayo wenze izenzo zakho, futhi ngeke ubekelwe noma iyiphi imingcele, futhi ukwazi ukwenza intando kaNkulunkulu. Umsebenzi kaSathane uletha izinto eziningi ezidala ukuthikamezeka kuwena, ukwenza ungazimiseli ukuthandaza, uvilaphe ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, ungafuni ukuphila impilo yebandla, futhi ukuqhelelanise nempilo yangokomoya. Umsebenzi kaMoya oNgcwele awuthikamezi impilo yakho yansuku zonke, futhi awuthikamezi ukungena kwakho empilweni yangokomoya. Kuzo zonke izinto ezenzeka kuwena, uwukwazi ukwahlukanisa isikhathi. Emva kwezinsuku ezimbalwa, noma kunjalo, uyaphila kancane, ukhombise okuthile, kube khona ukuphendula ngaphakathi kuwena, bese ngalezo zibonakaliso ukwazi ukubona ukuthi imicabango engaphakathi kuwena ivela kuNkulunkulu noma kuSathane. Ezinye izinto zikwenza uphikisane ngokucace bha noNkulunkulu umvukele uNkulunkulu, noma zikuyekise ukwenza amazwi kaNkulunkulu, futhi lezi zinto zonke zivela kuSathane. Ezinye izinto azicaci bha, futhi awukwazi ukubona ukuthi ziyini ngaleso sikhathi; kamuva-ke, uyabona ukuzibonakalisa kwazo, bese wenza ukwahlukanisa. Uma ukwazi ukubona ngokucacile ukuthi yiziphi izinto ezivela kuSathane futhi yiziphi eziqondiswe nguMoya oNgcwele, khona-ke ngeke udukiswe ezintweni ohlangabezana nazo. Kwesinye isikhathi, uma izimo zakho zingezinhle, unemicabango ekukhiphayo esimweni sokunganaki—okukhombisa ukuthi uma izimo zakho zingathandeki, eminye yemicabango yakho nayo ingaqhamuka kuMoya oNgcwele. Akuhlezi kunjalo uma unganaki, yonke imicabango yakho ithunyelwa nguSathane; uma lokho bekuyiqiniso, ungakwazi nini ukuphendukela esimweni esihle? Emva kokuba sesimweni sokunganaki isikhathi eside, uMoya oNgcwele ukunikeza ithuba lokwenziwa upheleliswe, uyakuthinta, akukhiphe esimweni sakho sokunganaki.
Ukwazi ukuthi uyini umsebenzi kaMoya oNgcwele, nokuthi uyini umsebenzi kaSathane, ungakwazi ukuqhathanisa lokhu kwesakho isimo ngesikhathi ubhekene nezimo zakho, futhi okuhlangenwe nakho kwakho, ngale ndlela kuzoba namaqiniso amaningi ahlobene nesimiso esisesimweni sakho. Uma usukuqonda lokhu, uzokwazi ukulawula isimo sakho njengoba sinjalo, futhi uzokwazi ukwahlukanisa abantu nezinto ezenzeka kuwena,[a] futhi ngeke kudingeke uchithe isikhathi esiningi uzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele. Yiqiniso, ukuthi nje uma izisusa zilungile, futhi inqobo uma uzimisele ukufuna, kanye nokwenza. Ulimi olufana nalolu—ulimi oluhlobene nezimiso—kufanele lube kokuhlangenwe nakho kwakho. Ngaphandle kwalo, okuhlangenwe nakho kwakho kuzogcwala ukuthikanyezwa nguSathane, nolwazi olungubuwula. Uma ungaqondi ukuthi uMoya oNgcwele usebenza kanjani, lokho kusho ukuthi awazi ukuthi uzongena kanjani, futhi uma ungaqondi ukuthi uSathane usebenza kanjani, ngeke uqonde ukuthi kufanele uqikelele kuphi ezinyathelweni zakho. Abantu kufanele baqonde ukuthi uSathane kanye noMoya oNgcwele basebenza kanjani; bayingxenye ebalulekile ekuphileni kwabantu.
Yize noma ungakholelwa kokunye ngaphandle kukaNkulunkulu, ingabe unabo ubudlelwane obuhle kanye noNkulunkulu? Abanye abantu bathi okubalulekile nje ukuba nobudlelwane obujwayelekile noNkulunkulu, futhi abazikhathazi ngobudlelwane babo nabanye. Kodwa bubonakala kanjani ubudlelwane obuhle noNkulunkulu? Ingabe abantu abanjengalaba abanalo ulwazi lwangempela? Kungani kuthiwa amandla okuzimisela kwakho ukuthanda uNkulunkulu, kanye nokuthi usuyilahle ngempela yini inyama, kuncike ekutheni unayo na imicabango yokubandlulula abazalwane bakho, kanye nasekutheni, uma kunjalo, ungakwazi ukubuyisela le micabango eceleni. Okusho ukuthi, uma ubudlelwane bakho nabazalwane bakho sebungobujwayelekile, izimo zakho ngaphambi kukaNkulunkulu zingezijwayelekile. Uma omunye wabazalwane bakho ebuthakathaka, ngeke umnyanye, umzonde, uhlekise ngaye, noma ukhombise ukungamgqizi qakala. Uma ukwazi ukuba usizo kuyena, uzoxhumana naye uthi, "Ngangiwumuntu ongenandaba nabanye abantu futhi ngibuthakathaka. Ngangingafuni ukuya emhlanganweni, kodwa kwenzeka okuthile ngakho uNkulunkulu wangikhanyisela ngaphakathi wangiqondisa; ngakhuzeka ngaphakathi, nganginamahloni kakhulu, futhi ngangihlala ngizwa ukuthi ngangimenzele phansi uNkulunkulu nokuthi kusuka lapho kufanele ngempela ngiphile impilo yami yebandla. Ngenkathi ngixoxisana nabafowethu nodadewethu ngokwengeziwe, kungale nkathi ngazibona ngokwengeziwe ukuthi ngingeke ngiphile ngaphandle kukaNkulunkulu. Ngangithi uma nginabo ngingazizwa nginomzwangedwa; ngangithi uma ngizivalele egumbini ngedwa ngizizwe nginomzwangedwa ngingenabangani, ngangibona impilo yami iyinalutho, nemicabango yami yaphenduka ukufa. Manje njengoba senginabazalwane, uSathane akazange nhlobo awenze umsebenzi wakhe, futhi angizange ngizizwe ngingedwa. Ngathi uma ngibona ukuthi lunamandla kangakanani uthando lukaNkulunkulu nolwabazalwane bami, ngakhuthazeka, ngakho ngaso sonke isikhathi ngangihlezi nginabazalwane bami, kanti nesimo sami nokunganaki sanyamalala ngokwemvelo." Ekuzweni lokhu, babona ukuthi akunamsebenzi ukuthandaza emakhaya, selokhu babona ukuthi akukho thando phakathi kwabafowabo nodadewabo, ukuthi impilo yabo ayinalutho, ukuthi akunamuntu abangathembela kuyena, nokuthi akwenele ukuthandaza nje kuphela. Uma uphilisana nabo ngale ndlela, lapho-ke bazoba nendlela yokwenza izinto. Uma uzizwa sengathi awukwazi ukubahlinzeka, lapho-ke ungabavakashela. Lokhu akudingeki kwenziwe umholi webandla—kungumsebenzi nesibopho sawo wonke umzalwane ukwenza lokhu. Uma ubona umzalwane ongumfowenu noma udade esesimweni esingesihle, kufanele umhambele. Lokhu kungumsebenzi womunye ngamunye wenu.
a. Umbhalo wasekuqaleni awunawo amagama athi "okwenzeka kuwena"
Okwedlule：Yilabo Kuphela Abagxila Ekwenzeni Abangapheleliswa
Okulandelayo：Isixwayiso Kulabo Abangalenzi Iqiniso
South African Gospel Song "Uyawazi Umsebenzi KaNkulunkulu" I Umsebenzi kaNkulunkulu esenyameni awumangalisi, futhi awumboziwe yimfihlakalo. Ungokoqobo…
South African Gospel Song"Ingqikithi KaKristu Inqunywa Ngumsebenzi Namazwi Akhe" I Ingqikithi kaKristu inqunywa ngumsebenzi namazwi akhe Ngenhliziyo e…